တရုတ် Palmitoyl Tetrapeptide-7 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | JYMed
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Palmitoyl tetrapeptide-7
အဘယ်သူမျှမ .: CAS 221227-05-0
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 694,919 g / mol
sequence: palmitoyl-Gly-Gln-Pro ကို-Arg-OH
Applications ကို: အရေပြားကယ်ဆယ်ရေးအလားအလာရောင်ရမ်းခြင်း, ကျန်းမာအရေပြားစောင့်ရှောက်
အထုပ်: 10/20 / 50g / စတင် / PP ပုလင်း, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်ထုပ်ပိုး
Palmitoyl tetrapeptide-7 အသားအရေရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အပူးတှဲအသားအရေပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချရန်အမိုင်နိုအက်ဆစ်အများအပြားချည်နှောင်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒြပ် peptide ဒြပ်ပေါင်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် peptide ဒြပ်ပေါင်းလည်းဆယ်လူလာတမန်၏မျိုးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အရေပြားအလည်လွှာထဲမှာကော်လာဂျင်အမျှင်များ၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးလှုံ့ဆော်သည်ဟုယူဆရသည်။ Palmitoyl tetrapeptide-7 ကိုလည်းအရေပြားအပေါ်ယံမှအစိုဓာတ်ကိုဆွဲဆောင်ခြင်းဖြင့်အသားအရေတင်းကျပ်ကိုကူညီနိုငျသောအသားအရေအတွက် hyaluronic acid ကို၏ပမာဏ, တိုးမြှင့်ဖို့စဉ်းစားထားသည်။ ဓာတုအသားအရေပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုရန်လုံခြုံဖြစ်စဉ်းစားသည်ဖြစ်သော်လည်း, အရေပြားအရောင်ခြယ်ဖြိုဖျက်ဖို့ပစ္စည်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုအရေပြားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ သင်သည်သင်၏အရေပြားကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးထုတ်ကုန် palmitoyl tetrapeptide-7 နှင့်အတူထုတ်ကုန်ကိုထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်နေလျှင်, တဖြည်းဖြည်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ရင်သင့်ရဲ့အရေပြားအထူးကုဆရာများ၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင်ဒါလုပ်ပါ။
Palmitoyl tetrapeptide-7 များကြောင့်အရေပြားကိုထိုးဖောက်ခြင်းနှင့်အသားအရေတစ်ရှူးသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းသည်အခြားဆန့်ကျင်အိုမင်းပါဝင်ပစ္စည်းများကယ်နှုတ်တော်မူရန်၎င်း၏စွမ်းရည်မှအလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်အတွက်အသုံးပြုမှုများအတွက်ဦးစားပေးမည်ပစ္စည်းဥစ္စာမှထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အရောအနှောတသားတည်းရှိနေဖို့ကပိုများပါတယ်ကတည်းကရေနံထဲမှာဖျော်၏အရည်အသွေးကြောင့်အထူးသဖြင့်ဆန့်ကျင်အိုမင်းထုတ်ကုန်အရေပြားထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုဘုံဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားတဲ့စံပြရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်။ toxicological ကိစ္စများပတျဝနျးကငျြအပြည့်အဝအစီရင်ခံစာရရှိရန်, အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုများနှင့်အခြားအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ဒီ palmitoyl tetrapeptide-7 FDA ကခွင့်ပြုချက်အဘို့ 2012 ခုနှစ်မိမိဆန္ဒအလျောက်အလှကုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအစီအစဉ်အောက်တွင်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအညီအမျှအိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာ State-Of-The-Art နည်းပညာများစုပ်ယူနိုင်ပြီးကြေညက်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းထမ်းများအတွက်ကြီးမားတဲ့ရွေးချယ်ရေး၏တိုးတက်မှုဆီသို့ဦးတည်ကျိန် ဆို. ပူဇော်ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ အလှကုန် Peptide/ အလှအပ Peptide Palmitoyl Tetrapeptide-7 / palmitoyl Tetrapeptide CAS 221227-05-0, အခုကျွန်တော်တို့လေးယောက်ကိုဦးဆောင်ဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တရုတ်စျေးကွက်ကာလအတွင်းမသာကိုရောင်းအထိရောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်လည်းနိုင်ငံတကာစက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကြိုဆိုခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအညီအမျှအိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာ State-Of-The-Art နည်းပညာများစုပ်ယူနိုင်ပြီးကြေညက်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းထမ်းတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ငါတို့သည်လည်းစိတ်ကြိုက်အမိန့်ကိုလက်မခံခြင်းနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ရုပ်ပုံအဖြစ်ကအတူတူလုပ်ပေးနိုင် Palmitoyl Tetrapeptide-7 ၏တိုးတက်မှုဆီသို့ဦးတည်ကျိန် ဆို. ပူဇော်ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, CAS 221227-05-0, Palmitoyl Tetrapeptide-3, သို့မဟုတ်နမူနာသတ်မှတ်ချက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏အဓိကရည်မှန်းချက်အပေါငျးတို့သဖောက်သည်တစ်ဦးကျေနပ်မှတ်ဉာဏ်အသက်ရှင်လျက်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဝယ်လက်နှင့်သုံးစွဲသူများနှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ယခင်: Palmitoyl Tripeptide-5
နောက်တစ်ခု: Palmitoyl Pentapeptide-3